» प्रधानमन्त्री ज्यु, छोरी-नातिनीसँग आँखा जुधाएर भन्नुहोस्, के उनीहरु सुरक्षित छन ?
प्रधानमन्त्री ज्यु, छोरी-नातिनीसँग आँखा जुधाएर भन्नुहोस्, के उनीहरु सुरक्षित छन ?
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:१६ प्रकाशित
चितवन – नेपालमा दैनिक जसो बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो केही समय यता बालिकाहरुमाथिको बलात्कारका घटनाहरु झनै बढेका छन् ।
गत असोज ७ गते बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ कि सम्झना बिकको बलात्कारपछि हत्या भयो । गोठमा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न गएकी सम्झनाको शव मन्दिरमा भेटिएको थियो । केही दिन अघी भक्तपुरमा बस भित्र नै एक युवतीमाथि बलात्कार भयो । यस्तै कञ्चनपुरमा बोलेरो भित्र विवाहित महिलाको बलात्कार भयो ।
यि पछिल्ला केही प्रतिनिधि घटना हुन् । यस्ता घटना अहिले दैनिक जसो घटिरहेका छन् । श्रृखलावद्ध रुपमा बलात्कारका घटना घटिरहदा पनि गृह मन्त्रीले केही दिन अघी नेपालमा चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था नरहेको भन्ने अभिव्यक्ती दिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने अर्को तर्फ बलात्कारका श्रृखलावद्ध घटनाले आम मानिसमा त्रास पैदा गरेको छ ।
यस्तोमा अभिनेत्री ॠचा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा खुला पत्र लेखेकी छिन् । उक्त खुला पत्रमा ॠचाले आफुलाई छोरी जन्मिएला कि भन्ने डर लागेको बताएकी छिन् । पछिल्लो समय बालिकाहरुमाथिको श्रृखलावद्ध बलात्कारका घटनाले छोरी जन्माउनै डर लागेको उनले उक्त खुला पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तै उनले छोरा पाउन पनि डर लागेको बताएकी छिन् । सँस्कार र अनुशासन सिकाए पनि देश र यहाँको कानूनले केहि नगर्ने रहेछ भन्ने मनस्थितिमा हुर्किन्छ कि भन्ने पिर पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
‘मलाई भोलीको दिनमा मेरो छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई छोरीको लागि सुरक्षित ठाउँ बनाउन नसकुला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई भोली छोरा पाउन नि डर लाग्न थालेको छ । मैले जति सँस्कार र अनुशासन सिकाउन खोजे पनि, यो देश र यहाँको कानूनले केहि नगर्ने रहेछ भन्ने मनस्थितिमा हुर्किन्छ कि भन्ने पीर पर्न थालेको छ,’ उनले लेखेकी छिन् ।
यस्तै ॠचाले प्रधानमन्त्रीलाई देशमा छोरी चेली सुरक्षित छन् त भन्ने प्रश्न पनि गरेकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो छोरी-नातिनीसँग आँखा जुधाएर आँफैले आँफैलाई प्रश्न गर्न आग्रह गरेकी छिन् । ‘जनताको नभए पनि एकचोटी परिवारमा छोरी-नातिनीको आँखामा आँखा जुधाइ भनि हेर्नुस, की यो देशमा उनीहरु सुरक्षित छन ?,’ ॠचाले लेखेकी छिन् ।
यस्तो छ ॠचाको पत्र :
एउटा अभिनेत्री बाहेक, यो देशलाई माया गर्ने चेली, एउटा नारी भएकोले हिजोआज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ डर लाग्न थालेको छ, मन आत्तिन थालेको छ। ती अबोध बालिकाहरूको कल्पना मात्रैले पनि छाती पोलेर आउँछ,। मलाई भोलीको दिनमा मेरो छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई छोरीको लागि सुरक्षित ठाउँ बनाउन नसकुला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई भोली छोरा पाउन नि डर लाग्न थालेको छ । मैले जति सँस्कार र अनुशासन सिकाउन खोजे पनि, यो देश र यहाँको कानूनले केहि नगर्ने रहेछ भन्ने मनस्थितिमा हुर्किन्छ कि भन्ने पीर पर्न थालेको छ । दिनहुँ स-साना नाबालकहरुलाई पनि बलात्कार गर्ने भक्षकहरु या त खुलेआम हिडेको या ढाकछोपले सामान्य जरिवाना र गन्न मिल्ने जेलका दिनहरु बिताएको देख्दा, एउटा नारी भएको हिजोआज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ । जून देशमा नारीलाई पुजिन्छ, जून देशमा सम्माननीय राष्ट्रपति स्वयं एक महिला हुनुहुन्छ, त्यस देशमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई, कानुन कार्यान्वयनक निकायहरूले यति सामान्य लिएको देख्दा हामी अझै सीताले अग्नि परिक्षा दिएको युगमै छौ झै लाग्छ। हामी टेक्नोलॉजीले चाहि विकसित भयौ तर अफसोस सोचले अझै पिछडिएका छौ । यहाँ बालिकाहरुलाइ समम् खुलेआम राक्षसहरुले भोग लगाउँदा, हामी कठैबरा मात्र भएका छौ । जनताको नभए पनि एकचोटी परिवारमा छोरी-नातिनीको आँखामा आँखा जुधाइ भनि हेर्नुस, की यो देशमा उनीहरु सुरक्षित छन ? म सरकारमा विश्वास राख्ने मान्छे, हिजोआज मेरा पैताला डगमगाउदैछन। बाँकी तपाईहरु बुझकी!